Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Sacuudi Carabiya Warka » Sheekada dhaqanka
dhaqanka • News • Sacuudi Carabiya Warka
Daraasada Ithra waxay ka heshay ka qaybgalka dhaqanka wanaagsan ee KSA iyo guud ahaan gobolka MENA in kasta oo ay jiraan caqabado nidaamsan.
Xarunta King Abdulaziz ee Dhaqanka Adduunka ayaa soo saartay saddex warbixin oo cinwaan looga dhigay "Dhaqankii Qarnigii 21-aad."
Mid ka mid ah warbixinnada ayaa cinwaan looga dhigay "Sida COVID-19 uu u saameeyay warshadaha dhaqanka iyo hal-abuurka."
Inkasta oo ka qaybgalka dhaqanka togan ee guud ahaan gobolka MENA, cilmi-baaristu waxay tilmaamaysaa helitaanku caqabad muhiim ah oo ku wajahan ka qaybgalka dhaqanka.
Xarunta King Abdulaziz ee Dhaqanka Adduunka (Ithra), oo ah hormuudka fikirka dhaqameed ee gobolka, ayaa u wakiishay saddex warbixin si ay si fiican u fahmaan horumarka warshadaha dhaqanka iyo hal-abuurka ee Sucuudiga, gobolka iyo xaaladda caalamiga ah. Cilmi baaristu waxay ku qaadaa maskaxda dadweynaha waayo-aragnimadooda hal-abuurnimo iyo dhaqameed waqti ay waaxdu ku socoto isbeddel xag-jir ah oo ay si tartiib tartiib ah uga soo kabato saamaynta COVID-19. Waxay xoojinaysaa aragtiyaha khubarada Sucuudiga iyo kuwa caalamiga ah, iyadoo muujinaysa fikradaha muhiimka ah ee wax-soo-saarka, isticmaalka iyo doorka dawladda iyo kuwa kale ee awood u leh qaybta.
Saddexda warbixin ee ay qortay Ithra oo cinwaankeedu yahay "Dhaqanka 21st Qarniga", "Sharcidda isbeddelka warshadaha dhaqanka iyo hal-abuurka Sucuudiga" iyo "Sida COVID-19 uu u saameeyay warshadaha dhaqanka iyo hal-abuurka" Daaha ka qaad dhowr isbeddel oo mawduuc gaar ah oo la xidhiidha baahida dhaqameed iyo doorbidyada macaamiisha ee gobolka MENA, iyadoo Taariikhda iyo Hidaha soo ifbaxday mawduuca ugu caansan, waxaana ku xiga Filimada iyo Telefishanka.
Inkastoo guud ahaan ka qaybgalka dhaqanka togan ee gobolka oo dhan, cilmi-baaristu farta ku fiiqday helitaanka sida caqabada muhiimka ah ee ka qaybgalka dhaqanka. Fatmah Alrashid, Madaxa Istaraatiijiyadda iyo Iskaashiga ee Ithra, ayaa carrabka ku adkaysay muhiimada ay leedahay in la dhaqaajiyo ka qaybgalka dhaqanka ee gobolka iyadoo diiradda la saarayo "ka-qaybgalka dhaqanka ee dhammaan" tayada iyo dhaqaalaha, bixinta goobaha lagama maarmaanka ah, iyo ka qayb qaadashada hirgelinta hindisayaal ka dhigi doona dhaqanka qayb ka mid ah barnaamijyada waxbarashada dadweynaha iyo manhajka.
Marka la eego caqabadaha sare ee ka-qaybgalka dhaqanka iyo isbeddellada warshadaha hal-abuurka dhaqameed ee guud ahaan gobolka MENA, daraasaddu waxay ku talinaysaa dhowr jiho iyo tallaabooyin siyaasadeed si loo dardargeliyo ka qaybgalka dhaqanka, oo ay ku jiraan:
Siyaasad-dejiyeyaasha iyo bixiyeyaasha adeegga waxay u baahan yihiin inay diiradda saaraan ka-qaybgalka dhaqanka mid loo dhan yahay iyagoo wax ka qabanaya caqabadaha macluumaadka iyo taageeraya ka qaybgalka kooxaha dakhligoodu hooseeyo
Dawladaha iyo bulshooyinka ayaa laga yaabaa inay hirgeliyaan hindiseyaal lagu horumarinayo barashada dhaqanka nolosha oo dhan (tusaale, iyadoo xoogga la saarayo manhajka waxbarashada)
Machadyada dhaqanka ee MENA waxay ka baran karaan midba midka kale awoodihiisa si ay u caawiyaan kor u qaadida ka qaybgalka gobolka oo dhan
Warbixinta oo kooban waxaa laga heli karaa shabakadda Ithra ee xiriirka soo socda: Warbixinta Dhaqanka | Ithra, iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Ithra iyo barnaamijyadeeda, booqo www.ithra.com.